Home Wararka Rooble & Kenyatta oo ku heshiiyay in Midowga Afrika dhexdhexaadiyo kiiska...
[AKHRISO] Rooble & Kenyatta oo ku heshiiyay in Midowga Afrika dhexdhexaadiyo kiiska Badda
Midowga Africa ayaa shaaciyay in ay soo fara galin doonaan muranka xaduuda Badda ee ka dhexeeyo Soomaaliya & Kenya, kaddib shir laga qariyay saxaafadda oo dhex maray Dowladaha Somalia, Kenya & Ingiriiska oo Boqortooyada Ingiriiska aay garwadeen ka ahayd shirkaas.
Warqad ka soo baxday Xafiiska Midowga Africa ee Adis Ababa ayaa lagu sheegay in xubnaha midowga Africa uu tixgalinaayo codsi kaga yimid dowlada Kenya Kaas oo ku salaysan in Midowga Africa soo kale dhex galo Muranka Hareeyay Somaliya & Kenya.
Sidoo kale Midowga Africa waxaa uu adkeeyay in uu diyaar u yahay in uu wada hadal u furo labada dhinac ee Somaliya & Kenya iyadoo loo maraayo hababka u dajisan ururka Midowga Africa.
Heshiiskan oo ahaa mid aay ka shaqeysay dowladda Qatar ayaanan dhicin in la is horkeeno madaxda labada dal ee Somalia iyo Kenya, balse iyadoo laga faa’iideysanayo fursadda shirka London ayaa Farmaajo waxaa uu wakiil ka dhigtay Maxamed Xuseen Rooble kaasoo saxiixay in colaadda xuduudaha ee Somalia & Kenya lagu dhameeyo wadahadal aay garwadeen ka tahay ururka Midowga Afrika.
Farmaajo hore ayuu u ballan qaaday in afar dekadood oo Somaliya leedahay siinayo Abiy Ahmed & Itoobiya. Sidoo kale Farmaajo ayaa meel fagaare ah uga khudbeeyay in kheyraadkeena Somaliya naga badan yahay oo dalal kale aay wax ka siineyno.
Dalka Qatar ayaa Saami ku leh shirkada shell & Eni oo shidaalka Somaliya doonaya inay ka boobaan shacabka Somaliyed, Farmaajo ayaa aaminsan inuu u dhaco kheyraadka shacabka Somaliyed dowladdo & Dalal shisheeye, isagana uu ku bedeshay inay kursiga ku hayaan.
RW Rooble ayaa ku dhacay dabin uu Farmaajo u maleegay, wuxuuna noqon doonaa shaqsi ka tilmaaman hoggaanka dalka Soomaray taasoo ka dhigeyso falka uu London ku saxiixay mid la mid ah kii uu Cabdiraxman Cabdishakur u saxiixay Kenya sanadkii 2009.